HomeAfaan OromooIBSA EJJENNOO MISEENSOOTA ABO KONYAA ARIZONA
November 27, 2020 Admin Afaan Oromoo 0
Phoenix, Arizona, 11/22/2020
Miseensootni ABO konyaa Arizona walgahii idilee guyyaa 11/22/2020 godhataniin haala biyyi keenyi Oromiyaan keessa jirtu gad fageenyaan xinxalanii saba keenya balaa dhufuu malu irraa tiksuuf Oromoon kan durii caalaa qabsoo isaa fininsuu akka qabu hubachisaniru.
Addi Bilisummaa Oromoo daandiin siyaasaa biyyattiin irra deemaa jirtu dogoggoora qofa osoo hin taanee biyya diguu akka danda’u dursee hubatudhaan tarkaanfiin sirreessaa akka fudhatamu daddabalee gaafachaa ture. Haa ta’u malee garuu deebbiin gama motummaatiin keennamaa ture faallaa ture. Waajiroota dhaabaa cufu, miseensoota dhaabaa hidhuu yokaan ajjeesuu, akkasumas hoogganoota dhaabichaa hidhu tu jabaatee itti fufe.
Kaayyoon qabsoo Oromoo midhaa namoota irra gahu irraa guddaa ta’uu kan hubate Addi Bilisummaa Oromoo dararaa miseensoota, deeggartoota, akkasumas qondaaloota isaa irra gahaa jiru obsaan hordofu fi furmaata seeraa argamsisuuf carraaqqii guddaa taasisaa ture. Nuti miseensootni ABO konyaa Arizona midhaan hogganoota keenya irra gahu kamuu halaan nu yaaddeessuus qabsoo obsa fixachisaa dhaabni keenya itti jiru kan halaan dinqisisamu ta’u ibsuu barbaanna.
Biyyittiin yeroo ammaa kanatti rakkoo wal xaxaa keessa sentee jirti. Wal waraansii motummaa Ethiophia fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru biyyitti qofa osoo hin taane gaanfa Africa diguu akka danda’u motummoonni Adunyaa himaa jiru. ABO rakkoon kun akka dhufu dursee hubatudhaan waltajjiin qaamoota siyaasaa hunda hammate qophaahee motummaan ceehumsaa qaamoleen siyaasaa hundi irratti wali galan akka ijaaramu watwaatuus deebbiin gama motummaatiin kennamaa ture faallaa rakkoo siyaasaa marihdaan furachuu ture. Waraannii amma kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru itti fufiinsa waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture ta’u hubatuun nama hin rakkisu. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaan kan duraani irra haala baayyee yaadeessaa ta’een dirree jequmsaa taatee jirti. Namni nagaan bahe galu dadhabeera. Dargaggoota Oromoo mana jireenya isaaniti yokaan mana hidhaati fuhdanii ajjeesani dagggala keessatti gatuun adeeffameera.
Nuti miseensootni ABO konyaa Arizona siyaasa biyyatti keessattu rakkoo sabni keenya keessa jiru ilaalchise yaadaa fi yaaddoo qabnu bal’inaan erga marihanneen booda ibsa ejjennoo armaan gadii baafnee jirra.
Ajjeechaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkasumas hidhaafi hiraarsi miseensootaa fi deeggartoota ABO irratti gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba. Oromooniis mirga of ittiisu umamaan qabu dhimma itti bahee karaa isaaf danda’amee hundaan ajjeechaa kanatti xumura gochuuf harka wal qabatee qabsoo isaa fininsuu akka qabu dhaammanna. Nutiis qabsoo Oromoon gaggeessuu galmaan gahuuf waan dandeenye hundaan kan cinaa dhaabbannu ta’u ibsuu feena.
Motummaa dabalatee humnoota siyaasaa sirna federaalizimii balleessuudhaan Ethiophia duraanii kan biyya tokkoo fi alaabaa tokko jalatti ijaaramte, olaantummaan saba tokkoo kan keessatti mirkanaahu, akkasumas adaa fi amantaan sabaaf sab-lammoota biyyatti keessa jiranii kan keessatti ukkaamsamu deebisanii ijaaruuf tattaafatan hunda halaan kan balaaleeffannuu fi akka hin dhugoomneef cimnee kan hojjeennu ta’u ibsina. Sirnii fedeeraalizimii keennaa saba Oromoof kennamee osoo hin taane bu’aa qabsoo gotowwan Oromoo kumaa fi kitilaan itti wareegaman ta’u hubatee sabni keenya bu’aa qabsoo hadhooftutiin arganne tikfachaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf kan durii caalaa tokkuummaa isaa cimsatee qabsoo xumura gabrummaa golee Oromiyaa hunda keessatti akka qabsisu dhaammanna. Nutis qabsoo sabni keenyi taasisu waan dandeenyu hundaan akka gargaarru waadaa keenya haaroomsina.
Wal waraansi TPLF fi motummaa Ethiophia gidduutti taasisamu biyyitti jequmsa guddaa keessa seensise jira. Kanaaf jeecha Oromoo fi Oromiyaa balaa irraa ittisuuf jecha murtoo ABO fi KFOn motummaa ceehumsaa Oromiyaa ijaaruuf fudhatan halaan ni deeggarra, fixaan bahumsa isaafis deggarsa barbaachisaa ta’e ni goona.
Motummaan cehumsaa ijaaramuuf yaadame kun kan Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sab lammiilee Oromiyaa keesa jiraatan hundaa ta’uun hubatamee Oromoon akkuma adeeffate nageenyaa fi qabeenya sabaa fi sablammilee Oromiyaa keessa jiraatani akka tiksu jabeessine dhaammanna.
Miseensoota ABO Konyaa Arizona